Maamulka Puntland oo Maamulka Soomaaliland ku eedeysay dagaal ka dhacay Gobalka Sanaag. – Kismaayo24 News Agency
Maamulka Puntland oo Maamulka Soomaaliland ku eedeysay dagaal ka dhacay Gobalka Sanaag.
by admin 29th November 2019 0112
Dhawaan deegaanka Waqadariya ee gobolka Sanaag waxaa ka dhacay dagaal u dhaxeeyey laba maleeshiyo,kuwaas oo isku qabsaday macdanta laga qodo Buuraha deegaankaas,waxaana dagaalkaas Puntland ay ku eedeeysay Soomaaliland.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland oo qoraal kooban soo dhigay Barta uu leeyahay Facebook-ga ayaa waxaa uu ku eedeeyey Soomaaliland inay Ciidamadeed ay qeyb ka yiiin dagaalkii ka dhacay deegaanka Waqadariya.
Dagaalka ka dhacay deegaanka Waqadariya ayaa waxaa ku geeriyooday Saddex ruux halka tiro kale ay ku dhaawacmeen,kuwaas oo dhamaantood ahaa maleeshiyaadkii dagaalamay.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland ayaa sheegay in Ciidamada Soomaaliland ay weerar kusoo qaadeen Waqadariya,isaga oo ugu baaqay Gobolka Sanaag inay garab istaagaan Ciidamada Dowlad goboleedka Puntland.
Sidoo kale Beesha Caalamka iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya ayuu ugu baaqay in cawaaqib xumada ka dhalata duulaan iyo dagaal ay deegaanka Waqadariya Soomaaliland ka wadao ay mas’uuliyadeeda qaadi doonto.
Si kastaba deegaanka Waqadariya oo uu dagaalka ka dhacay ayaa waxaa Ciidamo farabadan oo Millateri ah geysay Soomaaliland,taas oo keentay in dagaalka u dhaxeeyey labada maleeshiyo uu istaago.
SAWIRRO: Xulista xildhibaanada Maamulka Galmudug oo bilaabmatay.
Aas loo sameeyay somalidii naftooda kuweysay dadkii ka kacay daar kutaala
Mourinho oo si faahfaahsan uga hadlay saxiixiisa cusub ee Paul Pogba
admin 10th August 2016 10th August 2016